नेकपा भित्रकाे विवादले चम्किने भयो यी २ नेताकाे भाग्य! – PathivaraOnline
Home > समाचार > नेकपा भित्रकाे विवादले चम्किने भयो यी २ नेताकाे भाग्य!
काठमाडौं, । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवादले दुईजनाको भाग्योदय हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेका बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको भाग्योदय हुन लागेको हो ।
कुनै अप्रत्याशित घटना विकास नभए बामदेव र नारायणकाजीले आउँदो हप्ता नै मन्त्रीको सपथ लिनेछन् । उनीहरुले १८ भदौमा बस्ने नेकपा सचिवालय बैठक अघि या पछि मन्त्रीको सपथ लिने हुन् भन्ने मात्र फरक विषय हो ।
बिबाह भएको २२ महिनासम्म श्रीमतीले सम्बन्ध राख्नै नदिएपछि सुरेन्द्रले जीवन त्या’गे (भिडियो सहित)
राजधानीमा बम विस्फोट, मिर्त्यु हुनेको अंग चिन्नै नसकिने गरि छरपस्ट – भिडियो सहित
शुरू भैसक्यो सूर्य ग्रहण, ११:३१ सम्ममा अन्त्य हुने (प्रत्यक्ष हेर्नुहोस्)